तिथि मेरो पत्रु » आधुनिक डेटिङ बारे कुरूप सत्य
गरेको यो सामना गरौं, हामी अब राम्रो राजभाषा मा बस्न’ days where love, at first sight, turned intoacourtship which led toahappy, लामो वैवाहिक. प्रविधिको प्रगति, प्रतिबद्धता को डर, र विश्वासघात को उच्च दर, आधुनिक डेटिङ सजिलो छैन. अनि ढिलो 20 औं शताब्दीमा जन्मेका ती लागि, हामी विशेष गरी बस कसरी गाह्रो डेटिङ हुन सक्छ थाह.
कम फिक्री गर्नुहुन्छ गर्ने व्यक्ति सम्बन्ध मा सबै शक्ति छ र अझै पनि कमजोर छ किनभने कुनै एक अधिक ब्याज छ जो एक हुन चाहन्छ. हामी पनि उत्सुक देखा गर्न चाहनुहुन्छ किनभने, हामी फिर्ता पाठ दिन कहिले काँही घण्टा वा ले जान्छन्. यी मनोवैज्ञानिक खेल कसैको लागि मजा छैन.
फोन मर्न लागेको कला फारम छन्. सबैभन्दा संचार आजकल वास्तवमा संचार सबैभन्दा व्यक्तित्वहीन रूप छ जो पाठ सन्देश मार्फत हुन्छ.
Planning ahead and setting dates tend to never happen. सामाजिक मिडियामा धन्यवाद, अन्य रोमान्टिक गतिविधिलाई, र मित्र, होला बाहिर योजना भन्दा मिति क्षण बढी महमेज हुन जान्छन्.
जस्तै वाक्यांश “यो चिन्ता नलिनुस् गरौं” र “बाहिरै गर्न चाहनुहुन्छ” is code for “यो हुक गरौं”. अनि सबै भन्दा त्रासका यी सन्देशहरू प्राप्त गर्दा, तिनीहरूले प्रायजसो यी दिन समय खर्च गर्न कसैले आमन्त्रण गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका हो.
केही मानिसहरू सम्बन्ध को लागि लाग्दैछ, उनि अझै हुक गर्न चाहनुहुन्छ. दुर्भाग्यवश, यस अधिकांश समय तथ्य पछि सम्म भने छैन. आजकल, इमानदार धेरै कम प्रयोग गरिन्छ.
थुप्रै मान्छे तिर जान्छ जो प्रतिबद्धता को डर छन् “हामी सिर्फ कुरा गरिरहनुभएको” सम्बन्ध. मात्र यो कलंक लाइनहरु गर्छ, but these relationships also tend to never last. सम्बन्ध त जाँचमा चोर्ने आधिकारिक कहिल्यै पछि यी लेबल-मुक्त सम्बन्ध प्रायजसो एक व्यक्ति जाँचमा चोर्ने अन्त तर “साँच्चै भयो कहिल्यै”.
सामाजिक मिडिया प्रलोभन र आवारा मौका को पूर्ण छ. यस्तो चित्र रुचि रूपमा प्रेमलीला निजी सन्देशहरू र सूक्ष्म पक्कै जाँचमा चोर्ने लागि संभावना बढ्छ. सामाजिक मिडिया पनि अरू जो बाहिर छ हेर्न विकल्प देखाउँछ, यो अब परिवार र साथीहरुसँग सम्पर्कमा रहन बस एक तरिका हो. सामाजिक मिडिया पनि भावना व्यक्त गर्न प्रयोग गरिएको छ. स्थिति अद्यावधिक र प्रेमको चित्र पोस्ट, तपाईं सीधा उल्लेख छैन, जबकि, व्यक्तिहरूलाई व्यक्त को नयाँ तरिका हो’ साँचो भावना.
दुर्भाग्यवश, आजकल यो अन्य व्यक्ति पूर्ण अनफिल्टर्ड हेर्न धेरै गाह्रो छ. आम, साँचो हुन डराएको हो र सम्बन्ध मा पनि बाहिर त्यहाँ आफ्नै. डर भइरहेको यो धारणा पनि उनीहरूले उपलब्ध रूपमा प्रतिबिम्बित हुन चाहँदैनन् किनभने छ, पनि चिन्तित, पनि dorky, पनि राम्रो, पनि सुरक्षित, पर्याप्त हास्यास्पद छैन, आदि. के हामी सबै जान्नु आवश्यक छ कि तपाईं सही व्यक्ति फेला, तिनीहरूले तपाईं को सबै पक्ष गले.
अन्त, any person that you get romantic with will either end up being your life partner or eventually, you will break up – यी वास्तविकताहरु दुवै आतंकित गर्नु हो. जबकि आधुनिक डेटिङ छैन सजिलो छ, यो अन्त मा यसको लायक छ. हामीले त्यसो गर्दा लागि विशेष कसैले पाउन, हामी साँचो प्रेम प्राप्त गर्ने सबै अधिक यात्रा रूपमा कदर गर्न जान्छन् सधैं लायक छ.